သင်၏အမည်နှင့်ကျွန်နံပါတ်ကိုကောင်တာ၌မပြပါကစတင်နိုင်တော့မည်မဟုတ်ပါ။ ၎င်းသည်အစမျှသာဖြစ်သည်။ Martin Vrijland
အတွက် Filed NEWS ခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာခြင်း	by မာတင် Vrijland	မေလ 19 2020 အပေါ်	• 12 မှတ်ချက်
"ဒါကိုလုပ်ဖို့အစိုးရကတောင်းဆိုတာ။ ငါက Befehl ist Befehl ကိုလိုက်ကြည့်တယ်။ သင်မည်သူနှင့်အဆက်အသွယ်ရှိသည်ကိုခြေရာခံနိုင်ရန်သင်၏အမည်နှင့် ID နံပါတ်ကိုပေးရပါမည်။ အကယ်၍ သင်ဤအရာကိုမပြုလုပ်ပါကသင်စတိုးဆိုင်ထဲမဝင်နိုင်ပါ၊ သို့သော်ကျွန်ုပ်တို့နှင့်လည်းအွန်လိုင်းတွင် ၀ ယ်နိုင်သည်"။
စမယ် ငါဒီရဲတပ်ဖွဲ့ပြည်နယ်အစီအမံများနှစ်ပေါင်းများစွာကြိုတင်ခန့်မှန်းခဲ့ကြပေမယ့်ယခု Jeroen Pauw ကဲ့သို့မျက်မြင်မရသောရန်သူနှင့်မီဒီယာ NLP ပရိုဂရမ်မာအထူးကုများရှိလာပြီ ဖြစ်၍ ပြည်သူများကိုနိုင်ငံရေးသမားများ၊ ကျွမ်းကျင်သူများနှင့် ပူးပေါင်း၍ ထပ်မံစည်းရုံးသိမ်းသွင်းခဲ့သည်
(နှစ်စဉ်ပုံမှန်မဟုတ်သော) တုပ်ကွေးရောဂါနှင့်အတူ“ အသိဥာဏ်ကောင်းသောသော့ပိတ်ခြင်း” (အနည်းငယ်ကွဲပြားမှုတွင်ချုပ်နှောင်ထားသည့်အလေ့အကျင့်)၊ အဓိကအားဖြင့်မီဒီယာ၏စိုးရိမ်မှုများ၊ RIVM ကိန်းဂဏန်းများနှင့်လူတို့၏နားကြားပုံများထုတ်လုပ်ခြင်းတို့မှတဆင့်ထုတ်လွှင့်ခဲ့သည်
လူများအားလာမည့်မိတ်ဆက်စကားနှင့်အကျွမ်းတ ၀ င်ရှိစေရန်အက်ပလီကေးရှင်းများ၊
ဗိုင်းရပ်စ်ပိုးသည်ရှင်ပြန်ထမြောက်ခြင်းဖြစ်သော်လည်းသန်းနှင့်ချီသောလူအများအပြားသေဆုံးမှု (bioweapon သို့မဟုတ်အခြား) ဖြင့်အမှန်တကယ်လွှတ်တင်
မဖြစ်မနေလိုအပ်သော quarantine နှင့် roundups အပါအဝင်တင်းကျပ်စွာပိတ်ဆို့ခြင်းနှင့်ခက်ခဲသောရဲအရေးယူ
ထို့နောက်ဗိုင်းရပ်စ်ပိုးကူးစက်ခံရသူမည်သူမဆို၊ ပိတ်ဆို့မှုဖယ်ရှားပေးရန်တောင်းဆိုသူမည်သူမဆိုနှင့်ရဲတပ်ဖွဲ့အားစတင်မိတ်ဆက်ရန်အတွက်အလီဘာဘာဟုယူဆသူမည်သူမဆိုကိုဖမ်းဆီးထိန်းသိမ်းထားခြင်းသို့မဟုတ်ပြန်လည်ထူထောင်ရေးစခန်းများသို့ပို့ဆောင်နိုင်သည်။ ထိုအခါနည်းပညာထိန်းချုပ်မှုနည်းလမ်းအားလုံးမှထုတ်လွှင့်ခြင်း၊ ဒီဂျစ်တယ်လက်မှတ်များ (သင့်ခန္ဓာကိုယ်နှင့်ချိတ်ဆက်ထားခြင်း) နှင့်ဒီဂျစ်တယ်ခြေရာခံငွေများကိုမိတ်ဆက်ပေးခြင်းသည်အမြန်နှုန်းဖြင့်အကောင်အထည်ဖော်နိုင်ပြီးကောင်တာရှိ (စက်ရုပ်) အမျိုးသမီးကိုစကင်နာပေါင်းဂိတ်ဖြင့်အစားထိုးလိုက်သည်။
Tags:: ကိုရိုနာဗိုင်းရပ်စ်, Covid-19, အဆင့်, အထူးပြုလုပ်ထားသော, စမတ်, ပိတ်ဆို့ရှာဖွေမှုပြီးမှသာ, ရဲတပ်ဖွဲ့ပြည်နယ်
19 မှ 2020 မေလ 10: 43
စာဖတ်သူကိုရန်။ အခုတစ်ခုခုလုပ်ပါ အဲဒါလိုအပ်သည်။ ကျွန်ုပ်တို့သည်စစ်မှန်သောဒီမိုကရေစီနှင့်တရားဥပဒေစိုးမိုးရေးတွင်မနေထိုင်သောကြောင့် Martin ၏အသနားခံစာကိုလက်မှတ်ထိုးပါ။
19 မှ 2020 မေလ 11: 44
နယူးဇီလန် (ယူကေ) ကပွင့်ပွင့်လင်းလင်းပြောရမယ်၊
အကြီးမားဆုံးစူပါသည်သူတို့၏ Bonus Bullshit စနစ်ဖြင့်ဒေတာအားလုံးရှိပြီးဖြစ်သည်။ မျက်နှာအသိအမှတ်ပြုမှုမှာအချိန်ကြာမြင့်စွာရှိခဲ့သည်။ မီဒီယာတွင်ဖော်ပြခြင်းမရှိသောကြောင့်၎င်းတို့တွင်၎င်းသည်ရှည်လျားပြီးကျယ်ပြန့်စွာရှိသည်ဟုမဆိုလိုပါ။
မျက်မြင်မရသောရန်သူသည်အရာအားလုံးကိုလမ်းညွှန်မှုများအားလုံးကိုတိုက်ခိုက်ခြင်း၊ ခုခံကာကွယ်ခြင်းနှင့်အင်အားသုံးခြင်းများပြုလုပ်နိုင်သည် !!! သူမမြင်ရသောကြောင့်
19 မှ 2020 မေလ 11: 45
Joris အမှန်တရား wrote:
19 မှ 2020 မေလ 20: 56
20 မှ 2020 မေလ 09: 52
မျက်နှာမျက်နှာဖုံး: COVID ဖိနှိပ်မှု၏အစွမ်းထက်သင်္ကေတ
20 မှ 2020 မေလ 12: 19
ဒုတိယကမ္ဘာစစ်အတွင်း IBM ၏အခန်းကဏ္knowကိုကျွန်ုပ်တို့သိရှိပြီးဖြစ်သည်။ ယခုသူတို့သည် ID ID2020“ K (NO) W IDentity” ကိုလူတိုင်းမှတ်သားလိုကြသည်။
အရာအားလုံးဟာ blockchain ပေါ်မှာလာပါတယ်။
20 မှ 2020 မေလ 14: 29
IBM Blockchain ၏“ One World IDentity” အစည်းအဝေး၏တရားဟောစဉ်မြင့်ရှိအမှတ်တံဆိပ်သည်သင့်တွင်ရွေးချယ်စရာရွေးချယ်စရာတစ်ခုရှိသလား။
20 မှ 2020 မေလ 14: 38
လူမှုရေးအကွာအဝေးများပြားလာခြင်း၏ ၀ န်ဆောင်မှုအသစ်များတွင်အဖွဲ့အစည်းများအနေဖြင့်သူတို့၏ ၀ န်ဆောင်မှုများကိုလုံခြုံစွာနှင့်ထိရောက်သောနည်းလမ်းများရှာဖွေသည့်အခါလူအများမိမိတို့၏လုပ်ငန်းအသေးစိတ်အချက်အလက်များကိုလုံခြုံစိတ်ချရသောနည်းလမ်းဖြင့်လူများအားကူညီရန်ပလက်ဖောင်းတစ်ခုတည်ဆောက်ခြင်းသည်ကြီးထွားရန်ပုံငွေများကိုကြေငြာနေသည်။
သတင်းစာအဆိုအရ၊ သင်သည်အနားယူသောအခါသင်၏ကိုယ်ရေးကိုယ်တာအိုးထဲတွင်မည်မျှရှိသည်ကိုကျွန်ုပ်တို့ကြည့်ရှုသည်။ ထို့အပြင်၊ လာမည့်နှစ်များအတွင်းမျှော်လင့်ထားသည့်ပြန်လည်ရောက်ရှိမှုအပေါ် အခြေခံ၍ အပိုငွေပမာဏရှိပါသည်။
ဟုတ်တယ်၊ ငါတို့ဟာ dystopian orwellian အနာဂတ်ကိုရင်ဆိုင်နေကြရသည်
20 မှ 2020 မေလ 13: 08
မည်သည့်အရေခြုံဟန်ဆောင်နိုင်ငံတစ်နိုင်ငံကိုသူတို့ပိုမိုတွေးတောဆင်ခြင်ရန်လိုအပ်သည်။ zum kotzen ။
20 မှ 2020 မေလ 13: 52
လိုက်တယ်စပျစ်သီးကိုသူတို့လိုက်တယ် Duk သူတို့ထဲကတ ဦး တည်း? ငါထင်တယ် ...
20 မှ 2020 မေလ 18: 08
Adriaan W wrote:
21 မှ 2020 မေလ 13: 17
၁.၅ မီတာအကွာအဝေးရှိလူ့အဖွဲ့အစည်း၏ရည်ရွယ်ချက်ကိုအတိအကျစဉ်းစားကြည့်ပါက၊ မကြာမီအနာဂတ်တွင်လူတို့သည်အီလက်ထရောနစ်စောင့်ကြည့်ခြင်း၊ စောင့်ကြည့်ခြင်းဖြင့်တစ် ဦး နှင့်တစ် ဦး ကွဲပြားခြားနားမှုရှိလိမ့်မည်လော။
နောက်ထပ်ခြိမ်းခြောက်မှုတစ်ခုမှာသိသာထင်ရှားသော်လည်းအခြေခံအကျဆုံးမဟုတ်သော်ငြားလည်းလစ်ဘရယ်ဒီမိုကရေစီကိုတွေ့ကြုံနိုင်သည်။ နည်းပညာ၏သက်ရောက်မှုနှင့်တိုက်ရိုက် ချိတ်ဆက်၍ ပိုမိုထိန်းချုပ်ထားပြီးအာရုံစိုက်သည့်လူ့အဖွဲ့အစည်းတစ်ခုပေါ်ထွန်းလာသည်။ ထိုကဲ့သို့သောလူ့ဘောင်ကိုနိုင်ငံရေးအာဏာကိုတောင်းဆိုခြင်းသည်သာလွန်မြင့်မားသောသိပ္ပံနည်းကျသိပ္ပံပညာအပေါ်တွင်မှီခိုနေသည့်အထက်တန်းလွှာလူတန်းစားတစ်ခုကလွှမ်းမိုးလိမ့်မည်။ ရိုးရာလစ်ဘရယ်တန်ဖိုးများ၏အကန့်အသတ်များကြောင့်ထိခိုက်မှုမရှိသောဤအထက်တန်းလွှာသည်၎င်း၏နိုင်ငံရေးရည်မှန်းချက်များအောင်မြင်ရေးအတွက်လူထု၏အပြုအမူကိုလွှမ်းမိုးရန်နှင့်လူ့အဖွဲ့အစည်းကိုအနီးကပ်ကြီးကြပ်မှုနှင့်ထိန်းချုပ်မှုအောက်တွင်ထားရန်နောက်ဆုံးပေါ်ခေတ်မီနည်းစနစ်များကိုအသုံးပြုခြင်းအားဖြင့်တွန့်ဆုတ်လိမ့်မည်မဟုတ်ပေ။ ထိုကဲ့သို့သောအခြေအနေများအောက်တွင်နိုင်ငံ၏သိပ္ပံနှင့်နည်းပညာဆိုင်ရာအရှိန်အဟုန်ကိုပြောင်းလဲပစ်နိုင်လိမ့်မည်မဟုတ်သော်လည်းအမှန်တကယ်အသုံးပြုသောအခြေအနေအပေါ်တွင်သာမူတည်လိမ့်မည်။
« တရုတ်ကို ဦး တည်သော Trump ၏တင်းကြပ်သောဒေါ်လာသည်ကျဆုံးခြင်းနှင့်စီးပွားရေးပြိုလဲခြင်းအစလော။
Corona အကျပ်အတည်းကာလအတွင်းဒတ်ခ်ျလူမျိုးများမည်မျှငွေပေးချေနိုင်သေးသနည်း။ »
iPhone သည် covid-19 app ကိုနောက်ဆုံး i-OS 13.5 update တွင်ဝှက်ထားပါသည်
clairvoyance op သင့်ပတ်လည်ရှိလူများသည်အဘယ်ကြောင့်မျက်မမြင်ဖြစ်ရသနည်း။
ZalmInBlik op iPhone သည် covid-19 app ကိုနောက်ဆုံး i-OS 13.5 update တွင်ဝှက်ထားပါသည်
Zandi မျက်လုံး op အဆိုပါ Corona အကျပ်အတည်းကာလအတွင်းပိုက်ဆံ၏ကြီးမားတန်ဖိုးလျော့ပါးငွေဖောင်းပွမှုမှ ဦး ဆောင်: အ Bitcoin ဖြေရှင်းချက်လား
မာတင် Vrijland op အပြောင်းအလဲ၏အင်အားသည်ကြောက်ရွံ့ခြင်း၊ ပရိုဂရမ်းမင်းနှင့်မှားယွင်းသောထင်ယောင်ထင်မှားများကိုသွန်းလောင်းခြင်းဖြင့်စတင်သည်
မာတင် Vrijland op အစိုးရရေးရာများအပေါ်နှောင်ကြိုး Jordi Zwarts သည်တန်ချိန်များစွာရှိသော်လည်းမည်သည့်အရာမျှမရရှိပါ